Warbixino Suuqa kala iibsiga Cayaartooyda iyo Wargeeysyada Waxa ay Ka Qoreen -
HomeciyaarahaWarbixino Suuqa kala iibsiga Cayaartooyda iyo Wargeeysyada Waxa ay Ka Qoreen
Warbixino Suuqa kala iibsiga Cayaartooyda iyo Wargeeysyada Waxa ay Ka Qoreen
Heshiiska ay Manchester United Alexis Sanchez kala soo wareegeyso Arsenal ayaa ku kici doona Qiimo dhan 180 milyan oo bound kaddib markii uu ogolaaday heshiis afar sano iyo bar ah. (Telegraph)
Heshiiska Sanchez ee Manchester United ayuu 29-jirka ku qaadan doonaa usbuuciiba in ka badan 400,000 . (Independent)
Kooxda Liverpool ayaa Sevilla u sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay Amaah ku siiso dhaliyahooda Daniel Sturridge 28-jir inta ka harsan xilli ciyaareedka. (Mail)
Xiddiga bartilmaameedka u ah Chelsea ee Andy Carroll ayaa u sheegay naadigiisa West Ham inuusan tababarka la qaadan karin, balse Hummers ayaa sheekadaasi su’aal galisay kaddib markii Scan la marsiiyay Canqowga 29-jirka reer England. (Mirror)
Kooxda Manchester United ayaa bilowday wada hadalada ay qandaraaska ugu kordhineyso goolhayaheeda reer Spain David de Gea, 27-jir. (Telegraph)
Macallinka West Ham David Moyes ayaa xalay xaadiray Stamford Bridge kulankii ay Chelsea la yeelaneysay Norwich, si uu u daawado 24-jirka reer Belgium Michy Batshuayi kaa uu xiiseenayo. (Mail)
Kooxda Real Madrid ayaa aaminsan in la joogo waqtigii ay la soo saxiixan lahayd saddex weeraryahan oo cusub, 25-jirka reer Brazil ee PSG Neymar, 27-jirka reer Belgium ee Chelsea Eden Hazard iyo 29-jirka reer Polish ee Robert Lewandowski. (Marca)
Kooxda Bayern Munich ayaa sidoo kale xiiso kala kulmeysa kooxda Everton ee ku aadan daafaceeda garabka bidix ee reer Spain Juan Bernat 24-jir. (Liverpool Echo)
Xiddiga reer Armenia ee Man United Henrikh Mkhitaryan ayaa saxiix Cajiib ah u noqon doona Arsenal, u dhaqaaqistiisa Emirates Stadium ayaana noqon doonta mid ku haboon in 28-jirka uu dib u cusbooneysiiyo waayihisa ciyaareed, sidaa waxaa yiri rugcadaagii hore ee Man United Phil Neville.(BBC Radio 5 live)
Xiddiga qadka ee Sunderland Jack Rodwell ayaa sheegay inuu aad u doonayo inuu tago si uu u helo waqti uu dib ugu ciyaaro laakiiin 26-jirka saddexda kulan u saftay xulka Ingiriiska ayaa sheegay inuusan ka tagi doonin heshiiska uu usbuuciiba ku qaato 70,000. (Mail)
Kooxda Liverpool ayaa ka cabsi qabta in Kooxda Bayern Munich uga adkaato tartanka xiddiga qadka dhexe reer Germany ee naadiga Schalke Leon Goretzka, 22-jir. (Liverpool Echo)
Daafaca Arsenal Hector Bellerin ayaa lagu wadaa inuu bartilmaameed u noqdo Juventus xagaagan. Camaaliqada Serie A ayaa isha ku heysay 22 jirka reer Spain tan iyo 2014. (Tuttosport).
Kooxda Juventus ayaa sidoo kale bartilmaameedsaneysa kubbad qaabeeyaha reer Denmark ee naadiga Tottenham Christian Eriksen, 25,-jir ama midka reer Germany ee Arsenal Mesut Ozil si ay noqdaan Lambar 10-kooda cusub. (Corriere dello Sport)
Kooxda Chelsea ayaa Manchester City iyo PSG kula soo biirtay saxiixa xiddiga qadka dhexe reer Ivory Coast ee Kooxda Nice Jean-Michael Seri, 26-jir. (TheSun)